Kuongorora - kumashure
The Psychosaurus inozvizivisa pachayo:
Ini ndinofunga nhetembo uye handina kuva munyatwa webiofant. Aya mafashoni ekunze anofamba zvisiri pamutemo kubva mudima murima uye kuyamwa fungidziro yeavo vakarara kubva muuropi hwavo nemateya avo marefu. Ndinozeza kushandisa mazwi anga atove nevamwe mumiromo yavo. Ndinoona zvisina kuchena. Ndosaka ini ndichiwanzo gadzira mazwi matsva, izvo zvinounza dambudziko rekuti hapana munhu anondinzwisisazve. Nekuda kweizvozvo, ndinofanirwa kushandisa mazwi akashandiswa zvakare kuti iyo yekuGerman inozivikanwa yakaumba zvisingaite. Mutauro unogona kutaura nekuti iwo unogarisa mifananidzo yakavanzika yekuvapo. Mutauro unonyanya kutaura nezve kupa imba mifananidzo yenyika. Zvinotirwadza kana munhu anotevera mazwi emutauro obva atora kuti ave nekufunga.Kufunga chaiko kunobata mutauro. Mitauro ndiyo I yeiyo Psychosaurus, iri muzinda wayo. Nyika chete inonyatsouya kuupenyu senyika mumutauro, nekuti kutaura kunoreva: kusika nyika. Pakutanga kwaive izwi!
Mole: Taura Psychosaurus, iri bhuku iri rinoti chii
Psychosaurus: Mubhuku iri mutauro unotaura woga.Na ipapo
Mitauro inotaura pamusoro pezvese, bhuku iri rine chero musoro.
Pinda: Ngative nemubvunzo wega: Ndeupi mutsauko pakati
iyo Psychosaurus uye iyo Carsten?
Psychosaurus: Ini handidi kutaura pamusoro pazvo, nyaya yacho mutoro
Bata: Yadzoserwa, dude!
Mole: Zviri pachena kuti bhuku iri nderimwe
Izvi zvinowedzera zvinoshamisa.
Mutauro unotaura mazwi anopfuura chiuru.
Kichermaus: Kana ndichida kunyorera Carsten, anawo
paInternet kana chimwe chinhu?
Psychosaurus: Panguva yacho iyo ine email kero
carsten-stemm@web.de uye zvakare ane yake online.
Waswolf: Vanotsiva kutsiva!
Goggle: Ini handinzwisise izwi, kunyangwe chiteshi chechitima.
Rabe: Iwe haufanirwe kunzwisisa zvese. Dzimwe nguva zvakaringana kuti ubve mazviri
Kuita kuti mazwi akutakure kuburikidza neasina.
Detlef kaviri doid
Detlef Doppeldoid haigone kufunga zvakanaka nehuviri huwandu hweuropi. Detlef anofunga nekukurumidza kupfuura mwenje, izvo zvinotungamira kune denga-nguva kuzvimba mune yake yehupenyu. Ipapo anobva anokasukira kuruboshwe, mukati nekunze, uye gross nemambure. Haazive kana uchipinda kana kunze kwekamuri. Izvo zvakashata nezve Detlef Doppeldoid: rimwe zuva aifunga vanhu vanhu. Detlef zvakare haigoni kuyeuka mutsauko pakati paAlbert Einstein naKonrad Adenauer. Detlef anozvibvunza kuti: '' zvakafanana '' uye '' zvakafanana '' hazvina kufanana? Dzimwe nguva Mr. Doppeldoid zvakare inogadzira kukanganisa kweLauchenic kuperetera. Kana akavhiringika zvachose, Detlef anotomboyeuka ramangwana.
'' Pese pandinenge ndisingachazive kuti ini ndiri ani, ndinotarisa kuazisi yangu: ndine nhamba yangu ipapo; chiverengero, zvese kwandiri, chete kwandiri. Yakasarudzika uye isinganzwisisike. Nyika inondida. Asi izvozvo zvinondiwana chero kupi? Ndiani ari kumashure kwezita Detlef Doppeldoid? Uye kadhi kadiki kapurasitiki kari kanoratidzei? Makadhi epurasitiki ari nyore kuumba. Unogona kunyengera chero chinhu nhasi. Iwe unogona kunyange kugovera chitupa. Ndiri kuwedzera kudeura kwazvo. ''
Tsuro iyo inogona kutaura inonzi iyo sungura inotaura. Iyo inguruve inotaura ichidya painenge ichitaura uye ichitaura ichirira. Midzi yemazwi haizivikanwe kwaari. Izvozvi arikudya rudo. Rudo rinongova izwi kwaari, munch, munch. Mumwe anogona kudya rudo asingadye, ndiyo huchenjeri yekutaura tsuro.
Iyo biologist inofarira iyo minhenga yemadhadha, iyo ontologist inofarira kuvepo kwemadhadha. Ndiani anopa madhiri? Mhinduro: Iyo 'Iyo'. 'Iyo' uye kupa kubereka kwakawanda kuve. Mumwe anogona nenzira imwe kupindura mubvunzo seinotevera: Evolution inopa madhiri, dhayi mazai anopa madhaini, dhadha bonde rinopa madhiri, Mwari anopa madhiri. Kunaya. Chaizvoizvo mumwe ngaataure achiti: gore riri kunaya. Kunyangwe Mwari haana kumusoro kune izvi 'izvo', nekuti zvinoti: Kuna Mwari. Izvi zvinoreva kuti: Iyo 'iyo' ihuru kuna Mwari. Imwe mhedzisiro ingave iri: Iyo 'Iyo' ndiMwari chaiye uyo Mwari anotanga kupa. Kune madhiri. Iwe hauti: zvinotora matata. Kupa kwakaropafadzwa kupfuura kugamuchira. Kupa kungangodaro zvakare kuri kwechechi pane kugamuchira. And theyhaina kujeka zvekuti hauchakwanise kuona mafashama ayo. Mhedzisiro: Hautombofungi nezve kuti madhiri anobva kupi chaizvo. Iyo 'iyo' ndeyekunyengera. Inonyepedzera kuziva. Kana tisingachaziva kuti gore rinenge richinaya, zvino 'Kunaya' kunaya. Iyo negation inopawo iyo 'iyo': '' Hakuna chinhu chakadai seElwetritsche! '' Ndiani angave uyu 'iye' uyo anokwanisa kupa idzi dzisina-dhadha?Hakuna chinhu chakadai sa Elwetritsche! '' Ndiani angave uyu 'iye' anokwanisa kupa idzi dzisiri-dhadha?Hakuna chinhu chakadai sa Elwetritsche! '' Ndiani angave uyu 'iye' uyo anokwanisa kupa idzi dzisina-dhadha?
Goldmarie uye Pechmarie
Pane imwe nguva pakanga paine mutauri wekukurudzira aive nevanasikana vaviri, vaviri vacho vainzi Marie. Imwe yacho yaishanda nesimba, imwe yacho simbe. Rimwe zuva mukadzi anoshanda nesimba akauya kutsime ndokuti:
'' Hapana kumwa mvura! ''
'' Ndiripo chete nezvikonzero zvepamutemo, '' akafunga mukadzi uya ane nyota. Musikana akanwa mvura uye akangoerekana awira mutsime, ipapo akapererwa. Pane imwe nguva akamuka zvakare munzvimbo isina kunyatsozivikanwa kwaari.
Mukadzi mukuru akamira pahwindo reimwe imba achida kugadzirwazve uye akazunza mutsamiro wake. Frau Holle, iro raive zita remuridzi, akati kumusikana: `` Vanokwanisa vakweguri vakadai seni havanetsi mazuva ano, ini ndine basa rakawanda. '' Uye nekuti mukadzi anoshanda nesimba aishuva kushanda, akaita basa repamba kuna Frau Holle.
Mushure mechinguva, zvakadaro, musikana akatanga kusuwa kumba uye akataura chishuwo chekudzoka kumba. Frau Holle akamupa chikumbiro ichi. Mukadzi wechikuru akatungamira musikana kugedhi iro raaifanira kupfuura naro. Mukadzi anoshanda nesimba paakapinda nepamusuwo, zvakanairira pamusoro pake kubva kumusoro neshuwa yakasvibiswa neasina kupukutika kubva paganda rake. Musikana wacho akati: '' Fucking handshit! Ndichatsiva zvinovava pane izvo zvichaitika. Ndiri kudzidza masvomhu uye ndichiita doctorate yangu paratex theories. ''
Mai vacho pavakaona mwanasikana wavo anyudzwa nedutu, akatumidza mwana wavo kuti Pechmarie. Nezvikonzero zvekuenzana munharaunda, amai vacho zvino vakatumira mwanasikana wavo ane usimbe kutsime. Zvingangoitika zvakafanana zvakaitika. Chete, panzvimbo pekuenda kumba kwaFrau Holle, mwanasikana wake wechipiri akauya kune imwe imba maigara imwe Frau Helle.
Mushure memaminitsi gumi ebasa, tsika yemusikana ane usimbe yakawedzera kushatisa. Mai Hell vakati, `` Pazera rako, ndakapusa. Ini handina kana diploma rechikoro chepuraimari. Iye zvino tava kumhanyisa muChâteau Mouton-Rothschild 1945, uyo mukuwasha wangu akazviba.
Sezvineiwo nzvimbo yese yepazara izere nayo. '' Mushure mekurumwa-vhiki-refu kwekunwa, vanhu vane usimbe vakasuwa kumba uye vakashuva kusiiwa kumba. Frau Hölle akavatungamira kuenda kugedhi rimwe chete iro Pechmarie rakanga rapfuura. Musikana ane usimbe paakafamba nepagedhi, kwakanaya goridhe paari. Zvino musikana uyu aive akanyanya kukosha nekuti goridhe racho raisagona kubviswawo. Paakasvika kumba, mai vake vakamutumidza kuti Goldmarie. Nekutsamwa kukuru nekuda kwekusarongeka kwehupenyu, amai vacho vakasiya chechi ndokuenda kunotongwa kwenyika. Pechmarie akazova purofesa wekutanga wemapundu ane dioxin mavanga pachiso chake. Hupenyu hwavo hwaive hwakazara mbichana. Goldmarie, zvakadaro, airarama achifara uye kugutsikana kusvika kumagumo ehupenyu hwake. > Kupera kunofadza
Mufudzi: Ndiudze, ibhuku rorudzii iwe rauri kutakura pasi poruoko rwako?
Wolfgang: Rimwe remakwai ako rakandipa bhuku rekuzvarwa. Musoro waro ndeuyo: Ita huku hwemaiwe iwe pachako!
Mufudzi: Kunofanirwa kunge kuri kuseka here?
Wolfgang: Majee haafanire kunzverwa. Ini handina kumboita majee Chero ani zvake anoita majee anotya chaizvo kuva mukuru. Handina kumboita chinjo. Uye kana chero munhu akaseka, ini ndinorovera mbongoro iyo pamuromo.
Gwai: Pamusoroi kana ndikakanganisa, asi ini ndakagadziriswa genetiki, saka ndinogona kutaura. Kune here mutero mutsva pane wemazizi cheki munguva pfupi?
Rimwe gwai: Iniwo ndiri chigadzirwa chinogadzirwa neMusiki, uye ndinoti kwauri: Varume vakaita sevakadzi, imwe nzira chete yakatenderedza.
Wolfgang: Ini ndaigara ndichifunga kuti ndiyo imwe nzira yakatenderedza!
Mufudzi: Ini ndinogara ndichi dizzy kubva kuhurukuro dzakaoma kudaro. .. Ah, tarira uyo anouya! Ari kuhongedza!
Wolfgang: Ipapo inogona chete kuve yekufananidza!
Mufudzi: Nei zvakadaro?
Wolfgang: Nekuti mumwe anogara achiti: Wese kuenzanisa kuregedza!
gwai rakatemwa: zvinoreva zvinogara zvine mutsindo. Saka mutauri anozvivimbisa nekukurumidza mukutaura kwake. Iyo yechipiri yeGerman ndeye Lapsus Freudianikus, iyo inodonha mune zvese zvakapfava kuzviwonesa.
Wolfgang: Irudzi rwupi rwekutaura?
Mufudzi: Gwai rakadzidza. Psycholinguistics kana chimwe chinhu.
(Iye murume akasimudzika asvika muboka rehurukuro.)
Kusimudza: Ivo vanonditevera. Kutengeserana kwangu mukubiwa
Plutonium kubva kuRussia nyukireya zvidyarwa yarohwa!
Mufudzi: Usaite chero chinhu, Otto!
Makwai: unogona kudya plutonium?
Mufudzi: Haasi ese makwai akadzidza!
Makwai ese pamwechete: Mähhhh!
Otto: Ndine nzira imwe chete yekubuda: kuzviuraya!
Wolfgang: Ndine imwe nzira yekubuda nayo. Ndinoziva wizard yakanaka kuisekisi. Anorwara neanorwara, asi neunyanzvi akapora.
Otto: Ndianiko muroyi uyu?
Wolfgang: Ndiye zvese zvaunofunga kuti ndizvo zvaari, nekuti ane zvakawanda
Mapurani ari mumba yechinomwe, kusanganisira Pluto.
Otto: Ini handibvumiri kududzira nyeredzi!
Wolfgang: Asi nyeredzi dzinotenda mauri!
Otto: Zvakanaka, ndinoda kuyedza, nekuti handina chimwe chandinofanira kurasikirwa nacho. Ini ndakazvirega ndakabatirwa tsuro uye ndinyore zita rangu kumashure zvekuti hapana anondiziva.
Mufudzi: Chinhu chikuru! Ikozvino iko kuguma kunofadza chaiko!
Munguva yekushayiwa, apuro anodya mapeya.
Mbwe: Masikati akanaka, maziso anotsvedza, une maziso anotsvedza.
Oblique Meso: Uye iwe uri monkey, iwe monkey.
Mhungu: Ndine tsvimbo ye dynamite pano.
Ndivanaani varikusungira awa pamusoro pembongoro?
Oblique: Ini zvechokwadi! Ini handiti kwete kuna TNT!
Iwe tembiricha yakanaka, iwe unofanirwa neMubairo weNobel!
(Iyo mhezi inodhonzera iyo dhizaini kumusoro kwembanje yemuridzi uye ichivhenekera iyo fuse. Mushure memasekondi anokatyamadza kwechinguva chekumirira, pane chisimba chakavanzika: guruva, marara uye zvisaririra zenyama zvinofukidza nzvimbo yekuputika.)
Mhungu: kwakanaka! Yakarova!
Kwedu isu mhuka hapana kuverenga kana ndima.
Iye zvino bhanana rinotanga kudyiwa. Haha!
Pakambove nekamota kadiki kekushuwa kanofamba nemota uye nyoro. Ngoro iri kufamba, iri kudhonzwa nebhiza. Mota isingachairi kutyaira nhasi. Mota padzakatanga kufambiswa neinjini, ngoro yakashanduka kuita simbi, ngoro ichinge ichidhonzwa, maruva akatumbuka uye mvura ikamhanya pamwe chete nayo. Chakavanzika chehupenyu chakagara muvhaye vhiri, apa vhiri rakamhanya mumvura. Mota yaive kuberekwa kwemusikana wesimbi. Denga rinotambanudza, nedenga rinotambanuka, rinofara. Stahltussi inodonhedza mudenga nedenga rekudzivirira. Hondo Yenyika I, kuyedza pasina simbi kuti uve bhiza zvakare. Stahlbussi ikozvino yave bhiza iye amene, ndosaka akapfeka ponytail. Mahosi anonyongedza kwazvo,kungoti elegance haichizivikanwe mune zera resimbi. Plastiki zvakare isimbi. Chero chipi zvacho chisina kudhonzwa nebhiza isimbi. Unoshamiswa nerunako usiri chidhowa chemafashoni.
Multi-mukamuri kamuri iro rakakura mukati mukati kunze kwekunze. Iyo yakawanda kabhodhi, semuenzaniso, inoratidzika seyakajairwa mukamuri rekapu. Asi kana iwe uchifanirwa kuvanda mune yekuvhara kana zvichidikanwa, iwe uchashamisika kuti uone kuti kune mabharani akazara muvharoji. Uye izvi hazvisi zvekufungidzira semhedzisiro yekushayikwa kweokisijeni. Nyika izere nemakomba mune chaicho. Uye kune zvimwe uyezve.
Ngozi inokutyisidzira iwe. Tsaona haisati yarova. Asi inogona kurova mune ramangwana; ndiyo njodzi. Hupenyu hauna kuchengetedzeka. Iwe hauzive kana hupenyu huchakanganiswa munguva inotevera. Njodzi ingori yakakomba kona, njodzi isingataurwe, inogona kushanduka kuva hope dzakaipa. Zvikara zvine ngozi; Capitalists zvakare. Izvo zvine njodzi kuisa matambo emagetsi mubhagi yakazara nemvura. Kuroora kune ngozi zvakare. Inishuwarenzi yehupenyu, kune rumwe rutivi, inovimbisa kuchengetedza: kana iwe warasikirwa nehupenyu, iwe unodzoserwa kune hutsva. Asi chenjerera kubiridzira kweinishuwarenzi: Makambani einishuwarenzi anokubiridzira zvikuru!
Kufunga vakadzungaira munyika yezvirevo. Nzira dzekufunga dzinomhanya musango reruzivo. Kudzungaira kwake kunoita kuti kufunga kuome uye pakupedzisira anosangana nemiti yake yekufunga uye chando chake chechando.
Fred anoona mwari paOlympus nefoni mbozha:
Fred: Mhoroi Mwari!
Kubva vamwari vange vachishandisa foni foni kubva riini?
Mwari: Ehe, iwe ingojaira. Ini ndaigona zvakare kutaurirana telepathically nevamwe vangu, asi isu vamwari tinoda kutiita kuti tinzwisiswe nevanhu.
Fred: Zvakanaka, ini handizvigone!
Brain wankers ndiyo tsuro yeye pneumistic agglation. Ivo vanonziwo misoro yezai. Neurolanten yako haichinji-chinja, asi yakareba. Bare walnuts inofanira kuvezwa pamisoro yavo yemhara nekuti ine yakawanda yeuropi mafuta. Neurolanten ndiyo tsvimbo dzepfungwa. Neurolanten inogonawo kuve iyo mitsipa yemiti kuburikidza iyo iwe haugone kuona sango kune ese aya. Asi chaizvo neurolanten ndiwo matangi ekudya kwemweya sushi.
Dzimwe brain wankers dzinonzi vazivi. Uzivi hunofunga pasina kunwa zveMweya, hwakachena pasina rudo. Murenje rezivo, iye anofunga anogona kuseka zvakaipa. Cacti haamboseki. Pfungwa dzehuzivi hwakaoma senge chembere. Vazivi vari munzira yekupora vava kutanga kunyora nhetembo.
Fred: Unoziva chii Detlef, ndakakwidziridzwa demigod.
Fred: Ndizvozvo! Ini ikozvino ndinogona kuwana mhinduro kumubvunzo chero, chete zvisingaite, asi ini ndichawana mhinduro.
Detlef: Ndiani akakusimudzira?
Fred: Mukuru mukuru!
Fred: Ndiri demigod chete. Ini handisati ndafa, asi ndiri kushanda pazviri.
Detlef: Mm, ita izvozvo.
Fred: Semuenzaniso, ini ndinopedzisira ndaziva chikonzero chekuti bhanana rakgwegwa.
Detlef: Ehe, nei?
Fred: Anoshuvira kubatana, bhanana anoda kudzokera kuparadhiso, angade kuita denderedzwa, asi kudonha kwemurume kunomurambidza kuti adaro, simba rake rinongosvika padanho rekutendeuka.
Detlef: Chii chinonzi dhigod anoziva!
Izwi rekuti `` ghost '' ishoko rakasurukirwa chaizvo. Izwi rinofanira kutsanangura zvakanyanya. Uchenjeri hunodzinga mabwe; pfungwa dzinobatana. Mhepo inovhenekera zvikamu zvepanyika senge zuva ndokuvapa chimiro. Pfungwa ndiye mufananidzo wezvinhu. Midzimu inopfeka zvidiki zvidiki nezvimwe. Pfungwa dzinogona kufunga, kungwara kunogona kungofunga kana kusanganisa.
Mutambi ane bhiriard anorova bhora netsvimbo yake, iyo zvobva zvarova rimwe bhora. Uku kukonzeresa-uye-mhedzisiro kufunga ndiyo pfungwa yakakosha yesainzi. Logic chete inotanga, haina chirevo. Iko kusununguka kwemutambi billiard kwakavanzika zvachose mune ino maonero epasi. Zvinokonzera imhuka dzakaonda, dzingangoita nzombe. Zvinokonzeresa kunyisa kuburikidza nesimba, kwete kuburikidza nerevo.
Fred: Ndinotenda nemusoro. Zvedenga rose rakarongedzwa zvine musoro. Nekudaro, vakadzi havasi chikamu chemadenga. Kufunga zvine musoro kunoita kuti usvike kune chero chipenga chemuti. Iwe unongo fanirwa kushanda nesimba mukufunga.
Arnold Heitermann: Logic haiti kuti tienderere mberi mukuziva. Muenzaniso: Kune maguru matatu akagara pamadziro. Mhondi inouraya inouya ichipfura imwe yeshiri.
Arnold: Shiri dzakawanda sei dzichiri kugara pafenzi izvozvi?
Fred: Kuchine makuva maviri akagara pamadziro.
Arnold: Wakaipa! Panotove nehuku rakagara pamadziro!
Fred: Izvo hazvina musoro zvachose!
Arnold: Izvi zvine musoro. Shiri yakapfurwa yakawira pasi ndokufa. Ruware rwechipiri rwakakatyamadzwa neruzha rwehodzi pakarepo rwakatiza rwuka. Ruvengo rwechitatu rwakaremara ne bang uye ndiyo yega shiri yekugara.
Fred: Nyaya iyi inoita senge yakavakirwa kwandiri, asi zvine musoro.
Arnold: Zvakanaka, pfungwa dzinogona kutsanangura zvese uye hapana.
Fred: Kunyanya mukutarisazve.
Arnold: Ehe, nguva zhinji mushure meizvozvo.
Chokwadi chaivapo kare, zvisinei.
Fred: Ko kana mushure mekupfura kamwe-kamwe mbeva shanu dzainge dzakagara pafenzi?
Arnold: Ipapo vaviri vembava dzekuzviuraya vangadai vakagara pasi vachitarisira kupfurwa.
Fred: Zvakanaka chaizvo izvo zvine musoro.
Arnold: Unogona kutsanangura zvese nepfungwa, kunyange zvisina basa.
Fred: Munhu, murume, ini ndinofanira kufunga nezvazvo.
Arnold: Asi ndapota ramba wakanyatsonzwisisika!
Fred: Uh ... yeah ... zvakanaka ...
Socrate: Unotaridzika sei nhasi mangwanani, Plato!
Plato: Simuka, iwe dhongi!
Socrate: Iwe haugone kuita hurukuro!
Bullet inogadzirwa zvakashatisa mukati mayo.Yaizoda kubereka kana ikadzipwa. Asi hapana anozvidza. Bhora rinoramba rakaomarara kunge matope uye harizivikanwe. Nei mabhora achingotenderera? Vanotenderera munzira, asi havashandure chimiro chavo mukuita. Pakupedzisira, ivo vachakungurutswa nekufamba. Sphere inosara sphere. Izvozvi zvinoitika kwandiri zvakare: mabara munhukadzi!
Iyo imbwa pachayo imbwa pfungwa. Ko iwo pfungwa wembwa inoratidzika senge dachshund, goridhe rinodzosera, gwai, kana kunyange poodle? Isu tinoziva zvakaita sedenderedzwa. Kune denderedzwa rimwe chete uye yakatenderera zvakakwana. Kunyangwe nemakona matatu zvinowedzera kuomarara: Ipfungwai iripo ine pemberai? Denderedzwa ndiyo chete pfungwa inogona kudhirowa nekukoshwa kwechiratidzo. Imbwa pachayo haigone kudhonzwa, imbwa chaiyo. Denderedzwa pachayo rinogona kukwezvwa. Tinamate here denderedzwa? Kune kunyange here “mukati mavo”? Zvinhu zvinongoratidzira "kwandiri"? - Iyo yakakwana mune chaiyo ichave isina kukwana kune hupenyu. Hupenyu hunoda kona mune denderedzwa kana gomba muwere. Iyo yakakwana inovapo sepfungwanekuti pachokwadi akakwana haagone kuvapo. Mukukwana kwehupenyu denderedzwa ine makona. Chipfuva bhora rakaenzana. Iyo inobereka chibereko chisina kukwana sehupenyu hwakakwana. Kunyangwe zvakadaro, chestnut inorwara neimwe nzira. Nei izvi? Iyo chete hedgehog ndiyo inoziva izvo!
Denderedzwa haigoni kufema. Hakuna kwese kwaanowana gomba kuti afeme. Denderedzwa pachayo rinogona kuonekwa segomba. Ko denderedzwa iri suwo rekuenda kune imwe nyika? Handikwanisi kutarisa zvakare kuti denderedzwa harinditenderi kupinda. Yakangovharwa chaizvo. Haufanire kusangana nevakomana vakadaro. Denderedzwa haritaure neni, rinogara ririsinganzwisisike. Denderedzwa rinogona kunge risina kana chinhu chekuhwanda: hazvina musoro, zvine moyo uye zvisina chinhu. -Kutenderedza ruvara rwechitenderedzwa. Uyu ruvara hauwanzoitika uye hauna zita. Nzira iri nyore kutumidza iyo ruvara ndeye `` ine mavara ''. Yakatenderedza inogona kuenda kune iyo nhanho isina denderedzwa kana arc. Chidimbu ndihwo hupenyu pachako.Nhasi munhu wese anofunga chimwe chinhu chitsva. Asi iyo denderedzwa yakasakarakuti kufunga kwake kutsva hakufe kwakaburitsa kupenga. Nekudaro, maaphilistines haana kumbovhiringidza kutenderedza nebhizinesi. Kunopisa izvo. Denderedzwa raida kuve denderedzwa uye rakumbira mubato basa kuti ridzorerezve. Mabharani aive akaenzana. Zvakapera zvakashata.
Iyo apuro inofunga uye peari inomira.
Hit ndiro rakanakisa kwechiito kuripo. Kurova chaiko kunotyisa. Ichi chiitiko chakave chakazara chakagadzirwa muDombo Age. Iwe unogona kuvhura maziso ako, bhuku zvakare. Tarisa muduramanzwi, rova ​​hwindo kana kurova mumwe munhu kumeso. Vaimbi vanoita ruzha nezviridzwa. Iko kurova kunokurova. The 1st FC meniscus inorova iyo Rosenheim flat tsoka 2: 1. Ani naani anorova anokunda. Nzira yakanaka yekurova ndeye nematombo. Iro dombo rakanaka rinonzi nyundo. Kukuvadza mukati mayo zvakasviba uye zvisina kuchena. Kurova kusafunga uye atomu. Kurova kupaza, kuparadza, kurova kunopatsanura. Mwana wekurova anonzi kucheka. Mwana akaipa. Mumwe mwana wekurova anonzi kusundidzira. Uyu mwana ari munhu anogonanekuti iine rimwe zuva pamberi. Kurova kunoita chibhakera, kunopa izvo zvaanoita dumbu.
Pfuma yebasa ndiko kuiswa kwese kwekupedzisira kwevanhu. Pane chiitiko chakasimbiswa zvekuti chakasimbiswa sedura repfuma. Semagineti yemagineti, pfuma yebasa inotungamira zvisikwa zvese kubva pane zvekunamata maonero. Iyo Werkschatz ndiyo yakasikwa Wikipedia yehupenyu. Nehurombo, kune zvakare matema emakwai mudura repfuma yeruzivo: anonzi Werkschmutz.
Kuna Mambo Orthos, kutonga kunoreva kurega zvinhu zvichirongeka zvinoenderana nekwavo kwemukati. Orthos haiendeseri zvido zvayo kune vanhu. Mambo havadi kumanikidza zvinhu, asi panzvimbo peizvozvo anotsvaga iwo mamwe maitiro uye anovarega vachizvirongedza. Vanhu, mbudzi uye zvimwe zvisikwa zvinogara munzvimbo yeOrtho, munhu wese anomira uye anofamba munzvimbo yavo chaiyo. Mushure mekufa kwake, Mambo Orthos achanyungudika mumvura yerwizi rwaanofarira, ruchazodururira mugungwa. Kubva kugungwa, tswanda yake yepfuma ichaenderera mberi kune vanhu vakatenderedza.
Nzara inogara ichida kudya. Nzara inotsamira pachinhu chechishuwo. Asi ndizvo chaizvo zvinoita kuti nzara inakidze. Akazvipira zvizere kuupenyu, vamwe vanototaura runyerekupe kuti ndihwo hupenyu pachavo.Iye hanzvadzi zvakare ane nzara: zita rake anonzi '' nyota ''. Asi izvo ndezvevakomana vanopenga chaizvo.
Chinodiwa ndiko kudzinga kwenzara nenyota. Kudiwa kwakashata uye kune kushayiwa. Zvinodiwa ndezvepasirese uye zvinogara zvichitaridza grey. Zvinodiwa zvinogona kuchengetwa chero kupisa. Inoda isingamboshanda, inogara yakatsiga. Kana iwe uchida chimwe chinhu, enda kunotenga.
Ndiani Anoda Chikafu Chekudya? Kunyanya kana ivo chete vanosanganisira ballast. Road mafirodha. Ivo vanozadza chisipo, asi vanoramba vachizvinyaradza. Ndiro rekupenya.
Iyo Psychosaurus iri zvachose kumagumo:
Simba rechando sedanho rakasimudza ruoko. Mafashama emvura anodurukira pasi kubva pachiso chinotonhora. Meso emukadzi wemumvuri anopenya sezuva mbiri muusiku. Asi kwete kwenguva yakareba. Mheni dzako dzave kubuda izvozvi. Mukadzi wemumvuri inobhururuka sengirozi dema mudenga. Nzvimbo isingazivikanwe inenherera. Iko kusati kwambovapo nepo, hapana kana ikozvino. Kuziva kwangu kusave kuri padyo nenzvimbo isina chinhu. Ini ndinodziyirwa, asi chete sekudziya, nekuti handina mumwe muviri. Kuchema pasina rurimi kunoenda wakasuwa nzvimbo isina chinhu. Kwese kunongova pasina, uko chimwe chinhu chinofanira kuva chaicho. Iko pasina chinhu, iwe haugone kuona chero chinhu, kunyanya kana iwe usina maziso. Asi ini ndiri kuona zvinotyisa uye handizive kuti sei.
Gomba rinoreva kushomeka kwekutenderera. Mahwanda haana chinhu. Kazhinji nguva, gomba iri ndima inopinda nekubuda. Dzimwe nguva maonero anoenda kunze kwegomba uye maonero anouya achipinda mugomba. Mahwanda ane nzara, angade kuzadzwa. Iko kukurudzira kwese kuvepo kugutsikana. Chokwadi chine maburi. Izvi zviri pachena zvekuti hapana munhu anovaona, kunyangwe nyanzvi yemagetsi neyekushandisa kwake kukuru. Kushaikwa kwezvokupfeka kunoonekwa muvanhu vasina kupfeka. Iko kusavapo kwechiya, kune rumwe rutivi, kunoramba kune nzara uye kusingaoneki. Kumusoro kunoita kunge isina chinhu. Kana chivharo ichi chazadzwa, iyo nzvimbo inokurumidza kunyangarika, yova yakaoma. Iyo esthete inorongedza ruvara kune iyo pasi kuti iwedzere kuwedzera kuzvivimba.
Iyo mhuka yemhando yepamusoro ine makumbo mana, "inorema" kana inorira. Pfungwa yemhuka iri rudzi rwemhando yerudzi rwevanhu vazhinji vane zvishoma zvakaenzana. Mhuka hadzina mashizha, uye hadzigone kugadzira mabhomba emaatomu. Mhuka vanhu vanodzokera kumashure. Nekudaro: rimwe zuva mhuka dzichanzwisisa kusakwana kweGödel theorem. - Asi riini?
Masikirwo anogona kuve akasviba uye asina kuchena. Iko kunewo maitiro evanorota: ichi chimiro iparadhiso yevanhu kunyangwe kudonha kwemunhu. Chimiro cheGerman Charles Charles Darwin anotaridzika seichi: kurwira kwevakasimba kurwisa kwakatonyanya. Chechipiri chedu hunhu. Nzvimbo yedu yechitatu inodaidzwa kuti inonzi artificiality. Hapana munhu anofarira kugara imomo.
Simba rekunze kubva kuSweden rakagadzirwa nechando chinotonhora kwazvo. Simba iri rinotora chimiro chemusikana wekare anonzi Eisblume pasi pano. Ruva rakagadzirwa nechando, ruva rakanaka. Maruva anoyeuchidza chitubu, nekuti ino ndiyo nguva iyo maruva nyowani anowanza kutumbuka mune kudziya kudiki. Ruva redu remuchando, zvisinei, rinotumbuka mukutonhora kukuru kwechando. Vamwe vanhu vese, ivo zvakare vakagadzirwa nechando, vanotakurwa kuenda kure nemuchando wedziva. Agnis yakagadzirwawo nechando, inogadzirwa nechando chinopisa. Agnis anoona Eisblume uye anofarira. Iwo maxoxo anogara achipisa. Semutengesi we ice cream, Mr. Sumpfstein munhu anofara. Mabhora ake echando ane zvinoputika zvinokanganisa kana iye akareba pamusoro pemakomo. Eisblume anoona Mr. Sumpfstein: Anowana kuvhunduka,iro roulette bhora riri kukunguruka mumusoro make. Hapana anoziva kuti bhora richasvika pakamira mucomputer yegumi nemanomwe. NaAgnnis zvichave zvitatu. Ice mabhora kana roulette mabhora, mabhora ese akafanana. Mabhomba ndiwo bhanga rakaipa remangwana. Uye ikozvino tiri kupaza mubhangi iri uye kusunungura kupenga. Wese munhu anopenga zvachose: Eisblume, Agnis uye Mr. Sumpfstein vari pamwechete mubhokisi rimwe. Unofema kupenga: Ah, zvakanaka. Ivo pakupedzisira vakasununguka!Agnis na Mr. Sumpfstein vari pamwechete mubhokisi. Unofema kupenga: Ah, zvakanaka. Ivo pakupedzisira vakasununguka!Agnis na Mr. Sumpfstein vari pamwechete mubhokisi. Unofema kupenga: Ah, zvakanaka. Ivo pakupedzisira vakasununguka!
Ropa rinoyerera mukati sesukobvu uye nekudziya kwesimba. Ropa revanhu rakazvimiririra chero nguva ichiri kutenderera mumatsipa ake. Yakatenderera ropa, saka yakatenderera. Ropa rinosimbisa denderedzwa rake. Kunze iropa muropa rinotonhora uye risina moyo syringe ratova rakafa kare .. Zvinotyisa sei! Kungodzokera chete kwabuda ropa. Kunze kwekunge zuva rovhenekera pane yakasvibirira furhu. Chero vampire anoziva kuti kana mwedzi uchipenya, ropa rakasviba. Hapana chaunoona masikati.
Kutamba kwemoto nemirazvo inotyisa. Kupisa kwemusango kunoparadza kusimba kwemafuta. Kupisa kunodzika mukamuri, meno anopisa anozviruma.esimba redutu rinopa zvakapoteredzana neiyo anodziya yekudziya. Nhengo dzemoto dzinofira mumadota. Moto unoratidzika, asi unotora iwo iwo chinhu kubva mumafuta. Chikafu chake chinodyiwa nekukurumidza kupfuura chakabikwa, nekukurumidza zvakanyanya. Iko kudziya kwemoto kunorara zvakatsiga munzvimbo yekusafa. Kana kupisa kukaita kupisa, kunova kupisa.
Iyo general inoratidza kungoita huso hwakawanda sezviri kudikanwa. Chinhu chakakosha chinoratidza zvakanyanya kujeka magumo. Iyo yakafanana yakafanana kwese kupi, inowanzoratidzwa nenzira imwechete. Mune mamiriro ezvinhu ezvose, iyo general inogona kuwanikwa munzvimbo dzose. Sekuru grey ve general vanonzi average. Iyo general inofanirwa kuchinjira kune yakasarudzika, iyo inogadzira kushushikana. Iyo general inopa chengetedzo kana iwe uchienda kuzororo mune zvisina kujairika.
Mumvuri wakamira unofanirwa kugara wakamira, kunyangwe uchienda chero kwaunoda. Kana mumvuri wakamira uchida kufamba, zvakatipoteredza zvinofamba kupfuura iye panzvimbo pake, iye amene anomira. Saka mumvuri wakamira unogona kufamba uye uchingofanira kugara munzvimbo imwechete nekusingaperi. Mumvuri wakamira hauna kambani. Ehe saizvozvo kune mamwe mimvuri yakamira, asi ndeimwewo nzvimbo.
Iyo nzira inotungamira kune chinangwa sekureba sekunge pasina esotericist inofamba pamusoro payo. Dunhu pfupi rinopfupisa nzira yehupenyu. Nokukurumidza anoenda nenzira isipo. Nekudaro, anoshaya ruzivo. Kubudirira kwake kunopisa uye kusine chinhu uye pasina nyama, asi dunhu diki rine hushamwari. Iyo nzira ipfupi inogara iri yakapfupi redunhu, chinangwa chayo chinonzi chisina basa. Dunhu pfupi rinoshanda pasina kukura, rinoenda risina gwara. Joachim Ernst Berendt akanyora bhuku: '' Hapana nzira, kufamba chete: KUTI uve muzvisikwa ''. Ari munzira kuenda kuratidziro yebhuku rake, akamhanyiswa nemotokari.
Unotya kuti kufamba kunogona kuwira pamusoro. Asi kufamba kwakakura: inogara yakaganhurana. Kumira kunofamba mukoridho. Nekudaro, kurara pasi hakuna kumboshanda.
Makomo akadhirowewa haana matambudziko uye anofara kuti anokwira uye akakura kwazvo. Denga rinofarawo kana makomo achishanyira izvozvo. Denga rakakura zvakare rinodawo kuvimbika.
Chikonzero chiri pazasi. Ndiyo nheyo, pasi, nheyo uye nheyo. Kana iwe ukatarisa muzasi, ipapo ichava mugomba rakadzika-dzika. Iwe haugone kuona simba rinokwevera ipapo. Pazasi uye gomba rakadzikadzika inodzikisira misoro zvakanyanya. Basa rakanakisa revanhu ndere kusvika pasi pezvinhu. Chete dzinotyisa chete dzinoda kuita chimwe chinhu chinobatsira, nekuti zvinobatsira nyika inoparara.
Pasi panorara pasi pasirese. Iyo inenge isisiri yeyenyika, iwe hauzive iyo, ndosaka usinganzwe kumba. Vakafa vanovata pasi pevhu, panewozve panobva kubereka. Zvimwe zvinomera zvese zvaizokura sei?
Iro gwai kudenga kudenga. Makore anogara achirwadziwa. Vanowanzochema. Asi ivo zvakare vanochengetedza mombe kubva kuzuva rine hutsinye. Gore rinofukidza zvakanaka nezvakaipa zvevanhu. Iwe unogona kutaurira kubva kwavo chimiro kuti nguva yasvika. Kufambisa uye kutamba kwemvura pamwechete mugore.
Iwe haufanirwe kuisa tsvina mu saladi. Zvikasadaro hosha inotyisidzira! Tsvina yakafanana nemuviri wechivi. Ronda rinogona kuona sekusvibiswa, nekuti ronda rinowanzogadzira ganda rinosemesa pamucheto rinotaridzika svina. Nekudaro, kusvibiswa kana tsvina inoratidza mhosva. Mumwe munhu anodzvanywa. Takamborwadziswa here nekuti isuwo takanga tisina kukwana? Kana isu hatina kukwana nekuti isu takarwadziwa? Kana isu tine mhosva yekutyora chimwe chinhu, mutemo kana munhu? Asi isu hatirwadze! Isu takakwana uye hatina mhosva! Chero ani anoti chinhu chakadai chinokuvadza uye saka ane mhosva.
Madziro ejeri anoumba moyo. Masvingo ayo ekunze akasviba kunze uye akatsvuka mukati. Musungwa Rasputin haasisiri mudiki, asiwo haazi mukuru, nekuti shure kwezvose iye achiri nemhezi. Germania yakasungwawo: Rasputin neGermanania vanoenda kunorara pamwe chete. Rasputin inotya kuti Germany ichaita syphilis. Germania inosiya Rasputin. Iye pamwe anofanira kungoita Pippi kwechinguvana, asi haazosvika kure, nekuti tiri mutirongo yemoyo. Jeri chivakwa chisingapukunyuke. Rasputin akamira pamberi pegirazi uye akataura pimples dzake. Iyo pus inopararira pane sirivheri isina mhosva: Zvinonyangadza chose, ey.
Rat uye bhomba reatomu
Mapundu makonzo akaenda megalomaniac. Ivo vanoshivirira radioacaction yakanakisa yezvose zvipenyu. Chokwadi rimwe zuva ivo vachava madzishe epasi. Makonzo anourayana, akafanana chaizvo nevanhu. Guess ndiani anogona! Nekudaro, makonzo akapusa kupfuura vanhu, nekuti vanodzidza nekukurumidza kuti vasadya chikafu chine chepfu pavanoona kuti avo vanofa. Ndokusaka reti yehupfu isiri chigadziriso chisingagumi mukudzima kwezvisikwa izvi zvisinga peri. MuMiddle Ages vanhu vaitambudzwa nemakonzo, nhasi makonzo anotambudzwa mumarabhoritari esainzi. Uku ndiko kukunda kwevanhu! Kubva kune akabatwa kusvika kune anokanganisa! MuTembere yeIndia Karni Mata, makonzo akanaka anotarisirwa uye anotarisirwa. MuMadokero, zvisinei, kune chete lousy sewer makonzo.MuChina kune kunyange rat iyo sechiratidzo chezodiac. Asi iyo aseptic Psychosaurus inoti: "Hatife tichirarama muMiddle Ages zvekare! Bvisa pamwe nezvinosemesa zvinotakura zvehutachiona! Sei vezvematongerwo enyika vasiri kuita chero chinhu? "Hapana chavanoita!"
Iwe haugone kubata kink nekuti iri kure nemutsara urikutamba kubva. Kana pasina chinobuda, ipapo pane zvinhu. Tambo inoenda kubva apa uchiendako. Zvakajairika zvekuti zvinoita kuti unzwe uchishungurudzika. Masainzi uye vagadziri senge mitsara. Tambo haidye hupenyu. Mutsetse unounganidza hupenyu uye unowana simba kubva mariri kuti ukwanise kupisa mukamuri kusvika pamwero makumi maviri.
Nzvimbo inotsvedza iyo inotsvedza zvichienderana nekuzivikanwa kwechinzvimbo, ichicheukira kukona inoenderana nekutsvedza kwechiteremba. Kuita kwakadaro hakuna kupokana, asi kunoenderana nerudo rwevanoda.
Iwo wakanaka muti unobereka michero gore rese. Iro huni dzeropa rakasimba; mashizha awo anogona kuseka. Iyo yakanakisa iyo, grey yakashata. Dhiabhori anodya zvakanaka. Izvo zvakanaka zvinogona kuzvimiririra. Asi zvakaipa zvinoenderana nekuparadzwa kwezvakanaka. Nekudaro, zvakaipa hazvigone kukurira.
Munyu unoumbwa nesodium uye chlorine. Kumira kunomira nemakumbo ayo maviri, asi kuvapo kunoda chinhu sevhu. Kuvepo kunoda mativi ayo, iwo haagoni kuve pachako. Zvinotyisa zviripo. Izwi rekuti "stock" rinosvika pedyo chaizvo neiro rechinongedzo.
Rume uye bat
Makonzo ane makumbo mana uye anomhanya achitenderera maererano nekuraira kwaMwari. Nekudaro, dzimwe mbeva dzakaramba hanya nekwavo uye ndokubuda. Zuva rose vanorembera vachitenderera neusimbe (kumusoro pasi) uye husiku kune mitezo (kunwa ropa uye zvinhu). Hembe sebhe ibofu. Ndiko kurangwa kwaMwari pamusoro pezvivi zvavo. Semhinduro yekukurumidzira, mbeva dzinobhururuka ikozvino dzinofanira kuona nenzeve dzadzo. Izvo zvinotyisa.
Vakadzi vatete vanokurumidza kugara mudoko reanorexia. Inopomerwa mhosva yeFlabby uye mafuta. Kana iyo mutete ichida kuwedzera uremu, saka inofanira kunzi "diki". Iyo nhete dzimwe nguva ine yakanyanyisa kuita kupfuura iyo gobvu, nekuti inogona kugonesa hwakawanda hunyanzvi mune hwayo inotapira tummy. Naizvozvo, iyo nhete inowanzove nekuchenjera kupfuura iyo gobvu. Izvi hazvishande kune dzakaonda bhodhi kudhiraivha, nekuti iwo ane dota gobvu pamberi pemusoro.
Zita rangu ndinonzi Schmidt uye ndafa.Ndakararama hupenyu hwezvivi. Kubasa kwangu kwaSatani & Sons, sahwira wangu anokara akashanduka kuita 100 euro nothi. Ndakaziva mukana wangu wehupenyu hwekunakidzwa mushure mekufa: Ini nekukurumidza ndakaisa iyo bhajeti mune chikwama changu uye ndikapenda muchinjiso pane yeganda rekunze. Mukuru wangu anga abatwa. Mushure mevimbiso yake yekuti handiende kugehena kana ndafa ndakazobvisa muchinjizve. Nguva pfupi yapfuura ini ndakatsvedza ndisingafare pane peel yebhanana kumberi kweAOK ndikadonha nemusana wemusoro wangu pabaseji rakaomeswa. Ini ndakafa pakarepo, Sezvakavimbiswa, ini handina kuenda kugehena, asi ivo havana kuda kuti ndiende kudenga kunyange nekuti ini ndakunda zvakaipa,asi usati waita zvakanaka. Ikozvino ndiri kungogara ndichifamba famba pakati pekudenga negehena uye handichazivi zvekuita.
Fred: Kutambura hakuna basa zvachose. Ndeupi idiot akanyatsogadzira pasi?
Detlef: Kutambudzika kunodzivirira kubva kune idiotic zviito. Zvinokutadzisa kunwa doro zvakanyanya. Zvakaipa zvinotungamira kune zvakanaka.
Fred: Hakuna imwe nzira here? Rudzi rwe rudo?
Papa: Mwari haakanganisike (seni), achazoziva chikonzero nei akasika nyika nenzira iyi.
Mephisto: Ini ndiri chikamu chesimba iro rinogara richida zvakaipa uye nguva dzose rinogadzira zvakanaka.
Bert Hellinger: Panzvimbo yepamusoro, zvakaipa zvakare zvakanaka.
Fred: Ini ndinogara pasi; pasi rakaderera, iro danho repamusoro haribatsiri kwandiri. Hapana chimwe cheizvi chinogombedzera.
Detlef: mwari wezuva akatambura futi. Akafa semurume pamuchinjiko uye akamutswa pazuva rechitatu.
Fred: Izvo mukubatana naye. Ndiri kunzwa zvirinani.
Mwari mukuru kuna ... Mwari anogara ari mukuru pane munhu anogona kufunga. Kuti uve parutivi rwakachengeteka, ini handidi kunyora chero chakaipa nezvaMwari, haungamboziva. Kunze kwekunge Mwari ari dhiabhori. Vanamwari Vakaipa Ivo ndiVamwari Chaiye here? Kana kuvapo kwavo kunodya pakudya izvo zvakanaka? Kana kuna Mwari mumwe chete, munhu anogona kungomuti Allah. Iyo miviri isina divi uye inokomberedza-inonzwika-inonzwika yeL-sauti. Kana paine vamwari vanoverengeka, saka zvinobva zvawedzera kuve nerudo uye nerudo uye zvakare zvinonzwisisika kuvanhu. Mwari mumwe nemumwe pakati pevamwe vamwari vane nharaunda yavo yebasa. Allah haachafanira kuve nemazita 99, nekuti kune vanamwari makumi mapfumbamwe nemairi. Uye mwari wezana zana angangobatanidza vamwari vese zvakare, saka zvinofungidzirwa.Iyo yekunyanyisa polarization mune zvakanaka nezvakaipa zvinoputika mukuwanda kwevamwari. Dzimwe nguva vamwari vanonziwo ngirozi, ngirozi huru kana zvisikwa zvepamusoro.
Garlic ndeye mutsva mutsva. Zvigunwe zvake zvakatsemurwa. Kuparadzanisa chaiko muhunhu kune midzi yayo. Nekunze, zvisinei, anyezi anoratidza kufanana. Garlic inobatsira kupesana nevampires uye varoyi. Iyo tuber inosimbisa iro ropa uye rinoita kuti iwedzere kupinda mepasiti zvekuti kunyange ma vampires anorasikirwa neanofarira. Iyo schizophrenic leek zvakare inouraya zvipembenene zvemuviri, sekunge tapeworms uye putrefactive bacteria. Garlic inokamura vanhu seutsi hwefodya. Vamwe vakadaro: ava vanhu vakanaka. Ivo vakaipa vakomana (semuenzaniso, vampires, varoyi, maNazi, vana vano fuckers, capitalist uye Greens vavhoti) vanonzwa vachidzikiswa nekunhuhwirira kwavo.
Unogona kukurumidza kuva mumwe wevapfumi uye akanaka nekusaina chibvumirano chidiki muhofisi yebusheni yaSatani & Sons: Iye kondirakiti (dhiabhori) anozadzisa chishuwo chose chepanyika. Mukudzoka, kontrakta anonatsa mweya wake wepashure pekufa kune vanamato vegehena nekuda kwekutsvagisa. Chibvumirano chinoshanda zviri pamutemo nekudonha kweropa kubva kune contractor.
Arnold anofungidzira nezve denda rinouya pamusoro penyika uye rinouraya vanhu vese vakaipa. Izvo zvakanaka hazvirware pakutanga kana kupona utachiona. Arnold mumwe wevakanaka vakomana, hongu. Kunyangwe achigona sei kuva nechokwadi chakadaro? Zvakadiniko kana denda racho rinongouraya vakomana vakanaka? Izvi zvinogona kureva, asi zvinowanzoitika kusarongeka kwenyika ino. Arnold anotya uye anoda kuvharirwa kutiza, kunyangwe achiziva kuti hazvigoneke.
Kuziva kunocheka kuve muzvinhu. Kucheka kwakanakisa kupfuura kuruma, ndosaka mosque isina zita rehunhu. Mweya yakasimba ine mahure kuti ite kushinga, vanotya havana maburi kumba. Haufanire kucheka chigunwe chako! Saka vanhu: ingwarirai! Ruvara rwekucheka runodaidzwa kuti kupinza. Pepisi inopisa uye mabhomba epabonde anogona zvakare kuva zvinonhuwira pane dzimwe nguva.
MaArms anotambanudza. Mumaoko maoko anotanga kutumbuka. MaArms anonatsa mukati memaoko, maoko anosimbisa mune mudziyo. Matavi ndiyo maoko emiti.
Muganho unoparadzanisa mumwe kubva kune mumwe. Inotanga kana kupera pamuganho. Muganho unoumba mudziyo wehupenyu. Ropa rinoda veins kurarama. Imba inochekera kugara nemadziro ayo. Kana kurarama kuchinge kwabuda mumba mayo, kunowira mugungwa rekushaya pekugara.
Ndiro ine mutenderedzwa. Kusiyana nechimiro, iyo mupendero unopedzisa yakasiya muridzi wayo. Chimiro chiri chishongo, iko kumanikidzwa kumisa kuwanda.
Izwi rekuti "nyika" rinotsanangura mamiriro ezvose. Nyika inogona kunzwisiswa sehukuru hwemhondi. Nyika ino haina magumo. Meso omunhu haawani rutsigiro mumigwagwa isingaperi. Nyika yakachengetedzeka yakavharwa kumucheto kwayo. Ikoko nyika yakachengeteka inombundira isina magumo nemaoko ehupfumi.
Gustav ibofu pane zvese zviyo. Tsoka dzake hadzione chero chinhu. Ndicho chinhu chakanaka, nekuti kana iwe usingaone chero chinhu, haunzwi mwoyo. Naizvozvo Gustav anofara. Kune vanhu vane bofu date. Iwewe wakapofumadza kwazvo. Bats vanoona vatema futi, asi inzwa zvakajeka.Iye mwenje ibofu kune rima? Rima rinoona here mwenje?
Mwedzi unoseka murima. Anogona kuvonekwa zvizere. Semwedzi uzere iye murume. Zvikasadaro iye mukadzi. Kana yaive imwe nzira yakatenderedza? Mwedzi unotenderera nekutya uchifamba mudenga. Haadi kuonekwa; chete werewawves, pops nemakunguo anotenderwa kuita izvo .. Mwedzi unotonga muchivande munzvimbo yehuipi, iko kunyengera nematama anotenderera, irwo rudo rwekare, rima rinopenya rinodaidzwa kuti mwedzi. Mwedzi unopenya wakasimba apo vanhu vakanaka vakarara.
Kune imwechete nguva uye inogara yakafanana. Chete chinguva chidiki. Idzo "nguva" zhinji hadzina musoro. Saka hapana nguva. Uye zvakadaro wachi iri kuteya. Ndokusaka mawashi ari manyepo.
Vanhu havakwanise kurangarira zvachose. Isu tinoona zvakapfuura kubva panguva yedu yanhasi. Zuva nezuva unorangarira zvakapfuura zvakapfuura. Kwaive chaiko
Pakutanga kwaive nemukaka. Denga rakagadzirwa kubva kumukaka, ndosaka isu zvakare tichitaura nezve Milky Way. Mukaka wakabva mudumbu remombe yekutanga, iyo hombe MUU.
Iyo nyowani inoimba sechiedza mune unyoro hwehupenyu. Nyama nyowani ine hutano pane nyama yakaora. Muchero wemichero mutsva pane ropa, nekuti mhuka yakaora mukukara kwayo.
Turtles izera rehumambo hwekare. Ivo vanobva panguva apo pakanga pasina nguva zvachose. Nyaya yavo yakatosiyanawo. Izvo hazviitirane nezvidimbu zvidiki, asi zvinyoronyoro dhonza sekuoma kwekumhanyisa mumutsara kubva pano uchienda uko. Pasi chairo harife.
Mhepo iri kuvhuvhuta muchivande nemumatongo eimba inodonha. Madziro erima haana chinhu chezviitiko. Dutu remoto raive nezuro, mavanga aripo nhasi. Mouse rinogona kunyora uye kuudza bepa racho nyaya yekuparadzwa kwakafa. Shiri dzinobhururuka pamusoro pezuva dzvuku remanheru uye dzinonyangarika munzvimbo.
Iyo Ur inogara ichisvika pakutanga. Iyo inokonzeresa, mabviro, supu yekutanga, iyo Uranus, mombe dzekutanga, tateguru, sango rekupedzisira, iro rakakura, uye nezvitupa zvekare uye nasekuru nasekuru nasekuru. Vokupedzisira vacho vaive vasati vajairana neshoko iri rine njodzi. Kunyanya kune ngozi muVienna zvinoreva chimwe chinhu chinonyanya kuve nengozi.
Pasi rakapetana! Dai pasi raive nzvimbo, saka vanhu veNew Zealand vaizodonha pasi. Rega NASA ibatise mapikicha ayo asiri emahara. Vanofanira kunge vakadzima mhepo yakawandisa yemwedzi!
Kutanga kunogona kutanga kamwe-kamwe kunge sespint kana kukwira senge fog mukuvhuvhuta. Zvirimwa zvinomera uye vacheche vanozvarwa vasina hutachiona muchipatara. Kutanga zvinoreva kuguma: kuberekwa kwemwana kunopedza nhumbu. Mavambo haasati azviziva pachawo: panguva yekupedzisira iyo chete pakutanga iyo inoziva kuti ndiani.
Vana vanodya chokoreti yevana. Vakuru vanodya chokoreti yevanhu vakuru. Zvese zvigadzirwa zvinonaka senge chocolate. Sezvauri kuona, vana hapana chakakosha. Ivo vanodya chokoreti senge iwe neni. Vana havafanire kudiridzwa, kunyangwe ivo vachienda kuharare.
A toadstool inoda kusununguka kwayo. Inoda mvura kubva kumusoro. Asi mushwa mutsvuku unoramba kugashira zvirango zvaMwari. Iyo nhunzi agaric inoda kuchengetedza zvese pasi pehutongi. Iyo imo muridzi wetsiwe. Dominance yakakosha kwazviri. Mvura inonaya pane iyo nhunzi agaric. Iyo fungus inocherekedza, kuti kune zvimwe zvinhu kupfuura masimba, asi iyo agaric haifunge kuzvivhura. Ipapo anozviita, nekuti wakashinga. Kutya kunobva kumusoro kumusoro mukati mushwa. Hei izvi. Iye zvino haasisiri toadstool, asi mbereko shoma, uyo anoda kurarama hupenyu hwepakati hwepakati mubako rayo. Asi izvi hazvishande. Iyo mbereko inodzidza uzivi uye inovandudza nyika uye inova yakakurumbira.
Martin Luther naPaul vakarohwa nemheni. Vakava vanhu vanojekeserwa nekukurumidza semheni. Mheni ichatirova zviri nani here? Kana iwo iwo mabhenji emagetsi ingori wedunhu pfupi rinogadzira hunyengeri? Iwe unofanirwa kuzviedza panguva yekutinhira kunotevera.
JF Kennedy muBielefeld
Fungidziro yekufungidzirwa yekudzivirira inoti guta reBielefeld haritomboripo. Kubva pane imwe nguva munguva iyo yakanga isingaite kuti mimvuri ifukidze kusavapo kweBielefeld. Ndosaka zvaive zvakakosha kwavari kuti varatidze kurangana senge dzidziso kana joke, kuti pasave neanowana zano rekuti Bielefeld yekunyepera ichokwadi chisina pachena. Asi nerombo rakanaka kune Bill. Musi waChikunguru 24, 1963, Bill Clinton akashanyira Mutungamiri weAmerica, VaJohn F. Kennedy muWhite House, ndokuvhunika ruoko. Clinton akati, "Ini ndichave President!" Nemabasa emashiripiti aya, Clinton akabira zvaakatemerwa uye zita rake kubva panguva iyoyo President Kennedy. Mhedzisiro yacho: Kennedy aifanira kufa. Kana kuti kwete doppelganger yake.Kennedy chaiye akaomeswa nechando. Kana kuvapo kwenhema kweBielefeld kutyisidzira kuti kuchiuya pachena, Kennedy akavengwa zvakare. Mushure mekuvhiyiwa kwekushambidzika uye kudzidziswa kwakasimba muchiGerman, Kennedy ava Lord Mayor wezvemumvuri guta reBielefeld pasi pezita renyepedzeri Pit.
Sindbart: Hei iwe, ndinokuona!
Windbart: Kupenga! Neniwo. Zvinoshamisa kana iwe ukafunga kuti isu vaviri haipo.
Sindbart: Kana vanhu vaviri vakasangana avo vasingatombovapo, vanova chaiye muhukama kune mumwe uye mumwe kune mumwe, nekuti ivo vaviri vanosangana padanho rimwechete, iro iro level rekusaziva.
Windbart: Iwe hauwanzosangana nerudzi rwake. Haawanzo kuwana chaiko. Isu tinofanirwa kutora iwo mukana kuve nehurukuro refu pamusoro pekunyengera uye chokwadi.
Sindbart: Great, ndichaveko.
Gungwa rinogona kuzvibvumira kuti rive rakakura nekuti rinochengeta chakavanzika. Gungwa rakagadzirwa nemisodzi yeVamwari (misodzi ine munyu). Gungwa chikafu chevhu. Iyo nyota yegwenga, zvisinei, yabvira kare yaoma, renje harichazodi kurarama.
Arnold Heitermann haaoni terevhizheni kana kuverenga pepanhau. Chete misoro. YeOtto Zvakajairika, chii chiripo chakakosha, zvese zvimwe hazvina kukosha. Arnold anofarira iyo hombe mufananidzo, kwete mune mayflies. Mukuwedzera, iwe haumboziva kana ruzivo rwakarurama. Kana musoro wenyaya uchiverenga kuti: "Mangwana nyika ichaguma!", VaHitermann zvechokwadi vanogona kuverenga ruzivo rwacho zvizere. Kuguma kwenyika kunogona chaizvo kukukanganisa, nekuda kwezvikonzero zvako.
Mvura inofarira kufamba. Kana zvakasikwa zvichibvumira, inoyerera futi. Mvura iri nyowani uye inoimbira pachayo. Mwenje inobhururuka nekufamba kwamafungu ayo. Mvura iri kwese kupi kune hupenyu. Mvura haina kugadzikana chero bedzi isinga zore pasi. Upamhi hunopfekedza mvura, iyo kusara kwemvura inoramba isina kubatwa.
Mumwe haafanire kunge ari datya, kwete bizi rinotyisa. Chero ani zvake anovakwa padyo nemvura kunge kunge churu achiri mupenyu mumweya. Mweya nedziva zvakafanana mvura, hove uye matatya vanoziva izvozvo. Iwe haugone kunyatsotya mumvura, mhuka chete dzakaoma dzinogona Kubvunza tsuro inotyisa! Kwete datya rinotyisa! Matatya haatombobuda mukuyaruka. Iyo hove ihove isati yaigadzira iyo kune mhuka yepasi: kukundikana kwekushanduka. Haasisisiri hove, asi yakanga isina kukwana kuti vagadzire monkey. Matatya achiri girazi kuseri kwenzeve, uye kwete ipapo. Kazhinji matatya anowana mapimpu, asi anobva adaidzwa maoads.
Nguruve dzesango dzinosvetuka kubva padenga reimba iri muguta rakashata reRoma. Nguruve dzesango dzakarova pajira pazasi nemisana yavo. Nguruve yemusango haina kupaza chero chinhu, inogunun'una nyore uye ndokurarama. Nguruve yakadaro yemusango yakasimba chaizvo. Ropa rako harisvavi. Muto wake wemoto unoburuka zvisina nguva kuburikidza nemumhanyi wemapfupa ake mumabhete ane simba.
Kunzwa hakuna ruvara. Ivo vasina kutendeka thugs, yavo chete rutsigiro is impermanence. Waizorega mwoyo wako uchinzwa manzwiro ake here? Kunzwa kupisa kune vazhinji uye nekuwanda, vanowedzera kusimba, vanodzoka vasingafungidzike semabhiza ari paousousel.
Upamhi hwenyika hunonyura mukati makadzika. Zvese zvinoenda kunorara uye mwedzi uri mudenga. Mwenje wayo wesirivheri unoyerera uchienda mukutongwa. Ruoko runoda kubata mwedzi uye inozviita: yakapwanya mwedzi. Sirivheri eropa rakasviba zvaro, inomhanya ichibva pasi kubva kune imwe nzvimbo yaimbove mwedzi. Nyika iri kudedera.
Rufu rwunoregedza hupenyu uye hwunoita kuti huvepo panguva imwechete. Ko iro gondo rinofanira kugara pacho? Chii chaanofanira kukanda musana? Anogona chete kurarama nekuuraya dzimwe mhuka. Semurume! Vegans vanoita-zvakanaka. Asi ivowo vanofanirwa kupindura kudana kwezvisikwa. Mushure mezvose, zvidyarwa zvakare zvinhu zvipenyu. Vegans vhitamini inoshomeka. Kusakwana kwavo kunovaita kuti vatarise vataridzika, ivo biovampires. Vegans vanonwa ropa retsika. Chikara chikuru murume.
Wakafa TV muvoni
Terevhizheni iri uye skeleton yakagara pamberi payo. Mapfupa ake asina chinhu haachaone chero chinhu kubva purogiramu. Mumwe munhu anodzima terevhizheni: Iye murume pfupa zvino anoona kuti ari kupotsa chimwe chinhu, uye anotsamwa. Chete mukuzvibvisa ndipo parufu unoona kuti wafa.
Chinangwa chehupenyu ndechekudyisa iyo agologistist huru. Zvirinani kuti ndiwo mafungiro aDr. Chiedza. Iye anotenda zvinotevera: Kubva kudenga kure kure nyanzvi yezvekurima inodyara mbeu yemweya yedu muvhu rekusanzwisisika. Kubudikidza neupenyu hwakaitika mweya utachiona hunokura kusvika munzeve inobereka yemweya. Nyanzvi yehupfumi yekurima inokohwa uye inodya iyi nzeve mushure mekufa kwedu. Dr. Brainlight ndiye mapatya mukoma waDr. Chiedza. Mangwanani ega ega, Dr. Brainlight inokanda mushure meiyo wholegrain muesli kana iye achifunga nezvake zvisiri izvo zvehama yake.
Zuva ndiro moyo wenyika, kune nzvimbo yakawanda mairi pane muchadenga. Iye ane dumbu hombe, rinopenya. Zuva rinobereka nyika. Zuva rinodya nyika. Zvese zvakaenzana. Zuva izvese. Ichena muvanhu vakuru, iri yero muvadiki. Zuva harina kuputira pachiso chako.
A vampire anotarisa mugirazi: murume ane bvudzi dema uye magirazi anotaridzika kunze kwesirivheri, ane chiso chakatsvuka. Iyo vampire inofunga kuti anotaridzika kunge munhuwo zvake mugirazi. Iye undead anozvizivisa ega mugirazi, kana akatarisa zvakananga pamaoko ake nemuviri, ipapo haaoni chero munhu. Haisi yakajairika, kunyangwe kunyange yemavampires. Chokwadi ane marabi.
Zvirimwa mhuka dzegirini dzisingagone kufamba. Mashizha ayo mabwe akagadzirwa nemvura. Kujeka kwezuva kunovaita vese girini. Dombo, mvura uye zuva zvese panguva imwe chete zvinopa hupenyu. Icho chirimwa chine kunyanya kukura, chinofarira kukura. Kukura hakuna majini, kunozovaziva pese pese. Chirongwa hachire kukura kunyangwe iwe uchichiita. Zvirimwa, kune rumwe rutivi, zvinokura zvisingaite nehupenyu.
Mahete mashoma mashoma akarova misoro yavo kuoma. Kuomarara kunopa kuramba uye kusimba. Mhezi yakaoma. Kazhinji kacho kuoma kunoramba kwakaoma. Nekudaro, penisi inongori yakaoma dzimwe nguva. - Just nei? -Mupendero wehurema wakamira semutsetse unogonesa mukamuri. Edges havafanirwe kufuratirwa, iwe unogona kukwiza musoro wako pavari. Kana madziro maviri paakakoromoka, kurovera kwacho kunonzi kumucheto. Saka mupendero mhedzisiro yekurovera. Saka hazvisi zvekutambudzika kwemoyo. Matombo akaomawo. Iro ibwe chinhu, haina kumeso, nekuti ibwe rinotaridzika semamwe mabwe. Zvese zvinhu zvakaenzana muhupenyu hwavo. Kabhodhi, tafura kana mazino, izvi zvese zvinongova zvinhu. Matombo akarara akatenderedza kwese kweseanonzi chokwadi. Unogona kurova vamwe skulls nebwe. Izvo zvaive zvakakosha muZera reDombo. Nhasi mamwe matombo anogona kutaura, aya matombo anonzi "mbozhanhare". Kana ndikafunga nezvazvo chaicho: Kune zvakare matombo akanaka, anonzi matombo anokosha. Dragoni dzinounganidza ivo.
Iyo inounganidzwa yakasimba, dzimwe nguva zvakare yakatetepa. Izvo izvo zvinounganidzwa zvinopa chengetedzo sechaunzi. Kana kuti mutoro. Izvo zvakaunganidzwa zvakaoma kupfuura kuunganidza. Kana kuunganidza kuchinge kwakaoma kupfuura izvo zvakaunganidzwa, ipapo munhu anotaura nezve '' kuvhima ''.
Iyo yepamusoro-soro haina kubatanidzwa mune iyo yakakura. Iyo yepamusoro-soro haina kusvika pakuziva iyo mvura panguva yekuwedzera kwayo. Kunyange iyo kufashukira kunogona kupfuma, iyo dzimwe nguva inopa, iyo yepamusoro-soro haisi kungobatsira chero chinhu, asi zvakare inokanganisa chinhu chipenyu mukuwedzera kwayo kukura. Iyo yepamusoro-soro ingori marara.
Hugo ane quirk. Quirk yake ndeyekuti iyo quirk iri pane yake skrini inomunetsa. Izvi zvinodzinga Hugo kupenga. Hugo aive nechikanganiso kumeso kwake kwemakumi emakore. Achigara akamira pamberi pegirazi, akatarisa quirk yake kusvikira chiremba wake wechipfuva abvambura bundu racho. Hugo ane quirk ine quirks. Asi chete nemaquirks emunhu. Kana zvese zvikanganiso, senge pane chakaraswa chose nepahwindo, Hugo haana hanya. Hugo ane chaizvo quirk.
Pfungwa isina chinhu inodyisa mukadzi wake anofa nechando. Mukadzi wegrey echando anonzi neurosis. Haana kukuvara zvachose, iye Woody Allen. Iwe unogona kuseka nezve neurosis nekuti weirdos vanhu vanoseka. Asi chando chekare hachisi icho chinokuvadza mune chaicho. Iko hakuna ropa kuyerera mumukadzi wechando, asi nezuro echando iri kufinha mukati make. Chando chekare chinopinda mune psychotherapy. Kurapa kwakadai zvakare kuri neurosis, yakachena sechando chitsva.
Imbwa nekati zvinopinda mune mbiri kurapwa. Iyo inorapa ndeye hyena. Imbwa nekati zvinoda kuchengetedza hukama hwazvo. Kurapa kunotadza. Nei zvakadaro? Chii chingave icho? Zvirokwazvo nemurapi, vese vane dambudziko pachavo.
Cheplin anoenda kuimba yekudyara kunoseka uye kuchengeta kambani yake yezvitunha. Aifanira kuuraya vanhu vazhinji kuti awane mari. Kutambura kwenyika ino nevakadzi hakufanirwe kuderedzwa. Cheplin inotsigira kurambidza kuseka kwese muGermany, kunze kweanonzi nzvimbo dzekuseka, mune vanhu vanogona kuseka zvakanyanya mushure mekubhadhara mari yekuseka.
Kuseka kunofara nemiromo yake. Kuseka kwakasimba kunoshanduka kuita kuseka kwakakodzera. Kuseka kunosekesa hakugone kusimuka kubva pasofa rehurongwa. Kuseka chaiko hakusi kusekerera, kuri kungofara. Ndiwo chete anodzvinyirira anopenga majee kubva pamuti wekutambura.
Isolde: Detlef, newe haungamboziva kana iwe uri kuita zvechecheche kana kana iwe uri zvakakomba.
Detlef: Zviri nyore kwazvo: kana ndinonakidzwa, saka ndiri zvakakomba, uye kana ndiri zvakakomba, kuri kungoita vana.
Isolde: Ndingaudza sei chinhu chimwe kunze kwechimwe?
Detlef: Iyo yekutanga ndiyo nyaya pane mazuva kunyange iyo yekupedzisira ndiyo nyaya pamazuva asina kujairika. Kana yaive imwe nzira yakatenderedza? Ini ndakavhiringika zvachose.
Isolde: Ndiri kupenga nemurume iyeye!
Miss Dr. Kackebart-Struller: Man Otto! Iwe unoziva zvauri kuita kune ozone layer? Nese serene fart, haingori yako asshole chete inokura, asi ozone holewo. Nese fart, methane inodururira mumhepo, iyo inopisa pasi. Usatiza! Isu tinofanirwa kuchengetedza nharaunda yedu!
Otto Struller: Wataura chokwadi, Mausi, ndizvo chaizvo. Ndiri kuenda kuimba yekutandarira izvozvi, fudza njiva.
Musango remusango, midzi yemiti inosiya ivhu ravo uye inofamba ichipfuura nepakati penyika. Kudzikama hakudzoke, asi anoenderera mberi nerwendo. Inopfuura nepamusoro pamakomo, inopinda mumipata. Dzimwe nguva iyewo anosvetuka.
Kutenderedza kana kutenderera ndiko kutenderera kwechitenderera chiri pakati penzvimbo yacho. Kukurira kwevhiri kwakabatwa. Iyo roll itself haina kutenderera, inoramba iri immobile inoenderana nepakati payo. Kudai mupumburu waizofamba uchibva mudenderedzwa kuenda pane imwe mraba, zvaive zvakasununguka kufamba. Bhasikoro chete rinoona kuti nyika iri kufamba kupfuura nakare, bhasikoro pacharo rinomira.
Zorora uye kurovedza muviri
Kuzorora kunofarira kuzivikanwa kwavo. Mumwe anogona kutsanangura kugadzikana sekusavapo kwekumanikidza kwekunze kufamba. Saka hapana zororo mu disco. Kwete pane autobahn futi. Kufamba kubva mukati nekuzorora kunogoneka. Kuvepo kune zororo. Iko kune zvakare kugadzikana kwekumanikidza kweZen Buddhism. Kudzikama kwakadaro ndiko kwakasimwa kufa pasi pano, kunoenderana nekumanikidza uye kuparadzwa kwe fidgety. Kudzikama chaiko, zvisinei, kunogara murusununguko.
Iyo hummingbird inobhururuka ichienda kumuzinda unonakidza apo vanhu vanotsvedza. 52 vasina korona vanogara mumuzinda. Hapana munhu uye wese munhu ari mambo uye benzi panguva imwe chete. Vanhu vari mumuzinda vese hermaphrodites. Iwe unogona kuzviita iwe pachako kana iwe uchinzwa sekuda kwazvo. Asi ivo vanonyanya kufarira kurongedza kutamba kwenyika: vari kufambisa. Spooling kwakakura kubhejera. Uri kuchemera pano naJojos, iwo madzimambo. Semapenzi, madzimambo akaisa korona dzawo mune horo huru pasi pechitubu. Iwo korona inoshanda sedendere kune hummingbirds. King Crimson anonyora zvakakomba zvisina musoro. Iwe haugone kutaura nemurume akadaro.
Basa rinotsvaira mukati maro risina munhu wenyika, iro rinonetesa, nekuti panzvimbo yemusana, basa rine chifuva chekutenda, chakashongedzwa nekudada. Kuzadzika kwavo kunowana basa pakurwisa kwemoyo. Ivo vanoshanda vanogona kukurumidza kukanganwa zvitunha zvavo mukamuri yepasi. Shanda unoshuvira kuregererwa, asi hachimbofi chakabvuma izvozvo. Basa ibofu, harione kuti riri kushanda, rinongoziva. Kristu soMununuri anga abuda kare. Munhu anodzikunura kuburikidza nebasa: Mu psychotherapy unozvishandira wega.
Kufambisa kwechokwadi kuri mukati. Bhiza rinofamba roga, asi ngoro inofambiswa neiyo simba remabhiza einjini yayo. Kufamba kunowanzo famba nenzira yenyoka, kureva mafungu. Kufamba, kushambira, kubhururuka kana kutyaira, aya ese mafambiro. Mazuva ano imwe inonyanya kutenderera. Mumwe anogona kufambisako. Asi hapana angazotora futi. Iwe unogara pane saiti.
Mhepo inovhuvhuta ichitenderedza kumeso kwaFrigg. Nguva iri kupera. Mvura inonyangarika mugomba. Zvese zviri kumhanya, zvave kutiza. Wetiye unomhanya, misodzi kuyerera. Hapana munhu ana Frigg, chete mhepo. Tsoka dzako dzakafukidzwa neshangu dzakakora. Ko kana iye akafamba asina tsoka? Ipapo mhepo yaizomutakura kumusoro uye Frigg aisununguka. Shangu dzake dzinorema ndiye mutoro weakare. Mhepo inonzi Wahuna inovhuvhuta kuburikidza nebvudzi rake. Sleipnir, bhiza rine makumbo masere, rinofamba richidarika Frigga. Frigga anonakidzwa, anogona kuiswa pabhiza kuna mwari wemhepo uye akatakurwa kwazvo akasimba, asina shangu, pasina.
Iko kuchenesa kuri kuitwa kunoitwa nemushini. Muchina haunzwe chero chinhu, saka unoshanda kubva mukushushikana kukuru. Iye anoita zvese nekufamba kwemawoko izvo zvaishomeka vashandi vekuita mumazuva ekare. Anobata asina kana kunzwa kana hupenyu, mechanics chete, kufamba pasina chirevo, chinangwa chete. Kunaka kwazvo kana muchina uchitiitira mapenzi. Asi ivo vanogadzira michina vakadyara hupenzi ivo pachavo. Mishini iyi ichaenderera ichidzvinyirira isu kubva kunze nehupenzi hwavo. Uchenjeri hwekugadzira hunosiyaniswa, asi hunoramba huri benzi. Isu pachedu isu tiri chete cog mune huru yenyika muchina.
Iye muridzi anoshevedza maoko ake. Maatomu ari mumaoko ake haazi emuridzi. Maatomu oruoko rwake anongokodzera chimiro cheiro rake pane chikwereti. Mushure mekufa kwemuridzi, maatomu ekare eruoko rwake akakodzera kutaridzika kwakasiyana. Iye muridzi wemba anonzwa ari paruoko rwake, akabata midzi neruoko. Iyo mudzi ndiko kuzivikanwa kwake. Haasi ruoko pacharo.
Iyo apenzi yakapenga
Iyo peel uye pulp zvinogara pamwe chete muapuro. Vaviri vakaroora here? Zvakawanda zvikuru zvinogara pamwe chete muapuro: iyo yakapamhama, iyo girini, iyo michero, kusungirirwa kwayo pamuti. Iyo apuro inofunga: 'Ndine hunhu, asi handisi wangu hunhu. Kana ini ndikazvitarisa, ndinowana chete zvivakwa, asi zvisipo. '' Iyo apuro inotsamwa pane izvi kuzviziva: '' Izvo zvese zvakashata! Ini handitombovapo! '' Hunhu hwese hweapuro inoenda nenzira yayo. Iyo spherical inoenda kuchamhembe, iyo yakasvibirira ichienda zasi. Kubereka kumadokero, uye nekurembera kweapuro kumabvazuva. Haisisiri apuro, haina kumbobvira yavapo. Iyo apuro yakaramba kuzivikanwa kwayo kwemanyepo.Akangokandwa pamwechete kubva kuKwake Kuti Ndiro Rangu. Iko kutsva kweapuro iripi? Iye anogara mune iyo pub uye anorega iye achimhanya!
Nhetembo zvinoreva kudzoreredza zvinoreva mukati merazvo. Zvisinei, nhetembo dzevanyori dzimwe nguva dzinosungwa zvekuti muverengi haachakwanise kuvhura bhokisi rezvirevo. Munyori chete ndiye anonzwisisa zviri mudetembo iri apo ari kunyora. Uye kunyange zvemunyori, kugona kwake kwakanyanyisa kwazvo mangwanani anotevera.
Iyo yakajeka inobhururuka yakatenderera zvakasununguka zviri pachena pasina kuvanda. Mahwanda anonyanya kuonekera. Kunyangwe iyo pachena inogona kuva nehuremu, hazvisi nyore kuona kuburikidza. Iko kuvhenekera kunova pachena kana chava plump.
Kubata kunosvika kune hutapwa hwayo mune mobile nokubudirira. Naizvozvo, kunyanya hove dzinouya mukutapwa kwakakosha. Ivo vanotsvedza uye vanogara mumvura inofamba, asi vachiri vanogona kubatwa.
Mhosva dzinongokosha chete kana ukasabatwa. Mhungu inouya ku zoo kunyangwe isina kana chakaipa. Zoo inzvimbo-yakakodzera jeri remhuka. Dzimwe mhuka dzesango dzakasungwa mukesi. Vana vanogara mutirongo yevabereki vavo. Madzimai ari mutirongo yekuvimba nemari kune varume vavo.
Chakavanzika hachifanirwe kuwona maziso emumwe. Iyo inogara yega (kana nevanorangana) mubhedhuru yayo uye ingangodaro ichiita zvinotevera ipapo: inodhonha, inodzvinyirira, inofara, inotendeuka zvinhu zvakagumbika, inochera, inotsausa vamwe, inoseka iwe, inotya, inozvidzivirira, inoramba, kana iine mwana. Chakavanzika: hatizive kuti chii chiri kuita. Icho chinogara chakavanzika.
Kubhururuka kunosimuka pasina tsoka kuburikidza negungwa rekukura. Mukubhururuka, kumusoro uye pasi zvinoridzwa zvinopesana pamusoro peumwe neumwe. Shiri ine simba isina kubata chibharo nyika. Uku ndiko kwenjere. Matoyi, zvisinei, haagone kubhururuka, mapapiro awo akagadzirwa. Mapapiro eshiri anotambanudza ruoko mudenga. Vari kumba uko. Mapapiro ndiwo maoko ekubhururuka, akaitwa musimba. Shiri inogona kubhururuka yakasununguka isina kubonderana neyekati midair. Mushandi, zvisinei, anokurumidza kudhiza pamwe naboss wake kana nehukuru hwehupenyu.
Chiedza chinobhururuka nyore nyore nepuzzle nzungu, zvinongopfuudza zvinorema. Chiedza chinotaridzika kuwanikwa pamusoro. Wood inoyangarara pamusoro pemvura nekuti yakareruka kupfuura mvura. Mhepo inopisa mhanza inofamba ichibva pasi nepadenga rebhuruu. Chinhu chiri nyore chinokurumidza kuva chisina basa. Chinhu chakapusa kudaro chinoitika nyore.
Chando chechando chinowira pasi nokungwarira. Akanyarara. Iyo flake inouya kubva kune imwe nyika. Iyo inopa chimiro kune ino nyika, dai zvisina kudaro masimba ese emagineti angangodonha. Kumusoro nekumaodzanyemba matanda, maginiti inowira muchando. Kubva kumatanda epasi, chando chinoronga shanduko dzakavanzika mupasi. Magineti yaro inopinda mukati mevagari vepasi vovaita vagari vanorema.
Dziviriro yakadaro chinhu chakanaka. Kudzivirirwa ndicho chinhu chekutanga chaunoda: kuchengetedzwa kwebumbiro, kuchengetedzwa kwehoro, mishonga yekuuraya zvipuka, kuchengetedzwa kwedata nekuchengetedza pfungwa. Iwe hauna kushanya kubva kuMuchengetedzo YePfungwa? Iri kuuya, ingomirira uone.
Idya cheww uye chew uye chew. Kudya kwema chews kwakanaka uye kwakanaka kusvikira chikafu chanyatsonaka zvekuti chinogona kubatanidzwa mune yako nyama. Nekudaro, chikafu chinogara chinotyisa. Pasi rine chepfu. Haisi imba yedu. Mhuka dzinogona kugaya zviri nani kupfuura vanhu, dzinogara padhuze nepasi.
Zvatinomira pamusoro pazvo zvinonzi pasi. Dzimwe nguva inonziwo ivhu. Mira nepasi zvakatsiga. Pasi rinogona zvakare kureva humus kana dombo. Chii chinonyanya kurova nezve pasi nderechinhu, chakasimba uye chinorema. Pasi rine rugare, pasi rakapusa. Mai guru rakakura harina kumeso. Iye anodziya here? Midzi inosvika muvhu, inonzwisisawo pasi. Midzi ndeimwe pamwe nepasi rese.
Nyuchi dzinogara muhupamhi hwenyaya, mukati. Nyuchi inoenda kunze uko kunotonhora. Inowira yafa pasi kunge chando chando. Nyuchi dzakaburitsa umukati wadzo kunge dzinodziya dzinodziya. Chero bedzi chando chechando chandochando, inguva yemisipiresi. Kana iyo Flake ikatumbuka, kusurukirwa hakuna kupfeka. Mukupusha iyo nectar, nyuchi dzinobatanidza nzvimbo dzese dzenyika uye kusimbisa masimba, dzinokwevera simba. Nyowani raive bhuku rakanga risati raverengerwa. Kunyange kubva kumunyori wayo.
Kurema kazhinji kazhinji kwakakura muhuwandu hwayo. Mukutungamira, zvisinei, simba rinokweva idiki. Giravhiti inosimbisa. Iyo ine chekuita chete kuburikidza nehukuru hwayo, kwete kuburikidza nemuvara wayo, nekuti kurema kwakanyanya kusviba zvakanyanya kuti kuve neruvara. Zvakaoma haanzwisisi chinosekesa. Zvinosetsa uye zvinorema kurara pamwe chete mune shuga. Giravhiti inobva kumusoro kana pasi? Kana kupisa kuchinge kwasimba, kunova kukweva. Zvakadii nezve ibwe risingagoni kukungurwa? Inorema here kana kuti yakanyanya? Akanyanyisa! Kurema kupusa pane hutsinye. Zviri nyore here ipapo? Zvakaita saizvozvo!
Mhepo inomhanya yakadzika pamusoro pemiti nepadzimba. Simba remhepo harisi kuoneka, chete mhedzisiro yaro inogona kuoneka. Mhepo inovhuvhuta iripo. Dandelion inovhuvhuta nemhepo, pamwe chete nemadota. Mhepo inokurumidza kwazvo. Asi zvinogara zvichirova.
Pfuma yakasarudzika. Iye ndiye chinhu chake. Huwandu hwakaringana, hunogara huchiyerwa nekuenzaniswa. Roti haana muridzi. Isolde ane dumbu hombe, asi iwo mafuta haazi ake. Zvese zvakapusa zvine zvakawanda. Hazvina basa kuti pakave nemusoro wakadii uropi hwaEinstein. Iyo ndiyo pfuma yehuropi iyo inoigadzira iyo yayo, kwete iyo nhamba yematanda. Iwe haugone kuenzanisa maapuro nemapere, asi chete uremu.
Mapapiro amatombo anonzi jecha. Sandlllers mashoma zvekuti anoumba yuniti zvakare senharaunda yevakazvimiririra. Jecha rinobva ranzwikwa sere. Chinhu chose chinotyisa, asi jecha harigoni kuchema nekuti yakaoma kwazvo. Matombo haana ropa kana mvura, kunyangwe sejecha. Misodzi yeanosuwa madhiri inopa mvura yemunyu segungwa. Ndokusaka jecha rinowanzo kuwanikwa sebhizi pane gungwa.
Vanhu vanongovapo mukuwanda. Mumwe munhu haakwanise kuva ega. Munhu wenyama semombe yemombe inova '' vanhu ''. Boka rinoumbwa nevanhu. Ropa revanhu iropa rehama yavo. Munhu, kune rumwe rutivi, ane eropa rawo. Panyaya yevaJudha vekare, ropa raAbhurahama rinomhanya kusvika pamabvi ake apera. Vanhu uye vevanhu vechinyakare vane hunhu hwavo muboka, kwete mavari.
Bhabhironi rakanga risiri mucheche: rakanga rakakura kwazvo kupfuura iye mukuru. Kune zvakare masketi muNew York. Asi izvi zvinofanirwa kuparadzwa nemagandanga nekuti ivo vanoda kukwenya Mwari. Dzinotamba dzakatenderedza mhuru yendarama, kukura kwehupfumi uye chiremba wezveconic. Hasha dzaMwari dzinozouya riini uye dzotsvagira vanhu vanotadza mumarara?
Fred akawana kusabvumidzwa kupinda kune yakakura chembere inosimudzira iri pedyo neGeneva husiku uye zvino yave kukambaira mune iyo mhete inotenderera: Anoona zvinyoro zvinyoro zvinyoro zvichipfuura mberi kwake.
Fred: Hesi zvimedu, unogonawo kutaura here?
Green particle: Ndine musoro, zvakaipa nekuti ini ndinongova nemusoro. Kubva zvandakawana ma fizikisi, ini handichagona kuruka nyika zvakanaka. Kunyangwe zvematongerwo enyika zviri kubuda kunze kwekutonga.
Iyo tsvuku tsvina inodarika yapfuura: Iyo inonamira kunze kwerimi raFred, iyo yakatonyanya kutsvuka kupfuura iyo chinhu chega.
tsvuku tsvina: Ndiri kuisa moto pasi padhongi remari. Kazhinji mari ingori ruzivo. Moto wangu unopa kukosha kune ruzivo. Ikitatu inobhururuka, ine ziso pahuma.
Triangle: Ini ini chikuru chembere iripo. Chaizvoizvo zvidimbu zvidiki zvinongowanikwa mugehena refizikisi. Diki haina chokwadi. Zvinhu zvakawandisa zvinowana, ndipo pavanonyanya kuva. - Fred anongo shamisika.
Masavhisi kunyonganiswa kunogadzirwa nevamwe vakasimba kuti vapinde munyika isina kugadzikana nekudzivirirwa kwepfungwa. Chaos ine mavara. Machavhara anobvisa marara ekare. Macheka anotamba uye haazivi kuti chii.
Mukunyora, mutauro unotaura chinyararire mune mutsindo, asi wakajeka mukuziva. Vanyori ndivo vanyori vechokwadi. Kunyora kunogara kuri izvo zvakanyorwa, kunyangwe uchinyora. Izvo zvakanyorwa ndezvekupedzisira uye zvinogara kwenguva refu kupfuura waini yakanaka. Izwi rinonyora kuburikidza nguva dzese.
Kutamba kuri kushinga. Chero munhu anotamba anopenga. Asi kutamba kunogona zvakare kutonhorera kana uri munhu asina hanya. Vanofunga havafanirwe kutamba. Kutamba kwacho kunokanganisa kujekesa kwavo kwepfungwa. Kushuva kushaya rudo rwekudya, kupenga senge yenyati inodya zvakarongeka zveuipi: zvinotapira zvigadzirwa zvinoita fressi-fressi!
Madonhwe emisodzi anodonha achibva kudenga. Vanoungana pasi kuti vagadzire rwizi runodzika murwizi. Erwin akagara pamubato unofamba-famba nepakati merukova rwe misodzi. Rwizi rwunoyerera ruchizara. Mafuta anopisa kurudyi kurwizi rweRwizi mukuremekedza Wotan. Kumhiri kuruboshwe pane muti une shiri yedombo wakagara pariri. Erwin anoramba achikwizaira achikwira muchikepe. Ikozvino chando. Iyo kanoona inoona munhu wechando pamhenderekedzo pakati peasipo pine. Meso emunhu echando ari mupenyu, iwo maziso echikamu chine simba. Erwin anoenderera achikwidza rwizi. Kuruboshwe, mumwe munhu ari kuridza rudimbwa. Mwari ava pedyo.
Mukadzi ari mutema aine mavara mavara anonwa neiyo inotonhorera. Vanobhururuka pamwechete pamusoro penyeredzi, pasi penyeredzi, pakati penyeredzi. Hupenyu hweTitanic hunobuda mukunyura kwayo. Chikepe chakapetwa chikepe chinoyangarara chaicho mumvura, chichiyerera chakananga kuchitsime chemvura yakanyorova: Bang! Madota anodonha kubva kumusoro. Iyo Eyjafjallajöweight yakazoputika.
Fit inozviona yakapesana nerudo. Sezvo zvakabatana, kukwana kwakaringana imwe uye imwe kuburikidza neshumiro yakafanana. Zvese zvinokwana pamwechete muchimiro. Doro, fodya uye ashtrays zviri patafura yekubikira ya Mr. Alki. Izvo zvine musoro, izvo zvinokodzera. Tafura yekubheka yaAlki tafura yakagadzirwa. PaInternet, Hinz na Kunz vari pamwechete mukatikati hombe yenyika. Hinz na Kunz vanongobatanidzwa nehupenyu hwavo chaihwo. Iyo internet haisi yevhasi, asi isina basa.
Chinhu chinhu imvi pakuvapo kwayo; hazvisi zvimwe. Zvinhu hazviteedzere. Iyo isina kumeso nyika muchina wezvinhu inotonga pasi: iyo Internet yezvinhu. Zvinhu zvinounganidza kuumba zvinhu zvepasirese. Satani anga aine nyika nguva zhinji mumawoko ake. Panyaya yezvipenyu mumwe haatauri zvezvinhu nekuti vanozvifambisa. Asi chinhu chidiki chinogona kufamba choga. Ndicho chinhu.
Chiyero chinogona kunge chiri icho chakakodzera, nerudo chakabikwa nevamwari vane shamwari. Semudzidzisi, chiyero chekurwara chinoburitsa miganhu kubva pasimba pamberi pemhuno yemudzidzi. Kune iyo pupil muyero unobva wazara, hupenyu hwake hunounganidza, uye indasitiri inogona kuburitsa magetsi kubva kudamu.
Zvese izvi kuwedzererwa kwezvinhu zvakawanda kumugumo wekusakwana zvachose. Zveshuwa here zvese izvozvi? Chinhu chose chakakwana chinotenderedzwa. Sezvinotarisirwa, chinhu chose chinofanira kupenya pamucheto wayo, asi chinoramba chiri grey ipapo. Ipapo mupristi weindasitiri anobva ataura kuti: "Zvese zvakapfuura huwandu hwenhengo dzayo!" Kunyangwe mushure memutsara uyu, zvese hazvipenye, hapana chimwe chingavonekwa. Iyo yose inoramba iri pachena isina zvese zvezvinhu. Kune zvimwe chete mubhuku iri.
Hapana chero nyika yenyika yezvose zvisina-zvinhu. Mukombe hausi-chigaro. Chipfeko hachisi chegore. Pasina kutaura nezve imbwa: imbwa inongori isiri-katsi seshiri. Zvese zvisina-zvinhu zvinouya pamwe chete munyika yezvisina. Vamwe vanoti hapana kana chinhu mushure mekufa. Iwe unoda here kugarako pakati pezvinhu zvese zvisina basa? Ichave yakasimba kwazvo mumba yekuchengetera yeisina chinhu.
Kunakidzwa kunoda zvinopfuura izvo zvinodiwa. Saka kunakidzwa kune chekuita nemufaro. Asi nepo mufaro uri chipo chehupenyu, kunakidzwa kunofarikanywa chaiko. Kunakidzwa kunogara uye kugara. Kunakidzwa kwekunakidzwa kunonakidza kunakidzwa. Kunakidzwa kunofadza kwakadarika. Kunakidzwa hakufunge, kunakidzwa kunononoka kune izvo. Kana matumbo akagaya kupfuura zvaakuda, saka anofara. Kugutsikana kunotapira, asi shuga mufaro.